Candho- soosaare Electric Dheelitirka mooto From Koowheel - Jomo Technology Co., Ltd
Candho- soosaare Electric Dheelitirka mooto From Koowheel
Koowheel E1 The, a 2 wheel eeganaya candho- Self Dheelitirka mooto Electric badan tahay mid ka mid ah miisaanka yar oo khafiif ah qumman autos xamuulka ah shakhsi caalamka. Waa Koowheel macay Cusub oo design qabow moodada, noocyada kala duwan ee headlamps iyo laambad dabada gaarka ah; Waxaa jira shaashad LED bandhigay gebi ahaanba taas oo ku tusi karaa batari iyo xawaaraha hadda; Gariirka Energy Design oo la yareeyo gariirka ilaa xad badan.
Waa mooto korontada si ay u iibsadaan haddii aad rabto in aad si loo hubiyo helitaanka wax soo saarka oo tayo sare. E1 waa model kacaan cusub soo saarka style sare. Waxaa jira qaababka badan by hoos ku:
stem kordhiin, wanaagsan ee carruurta iyo dadka waaweyn (Red, cagaaran) labadaba.
Tech Black bilaabo smart marka xawaaraha riix gaaraan 3km / h;
nuugista lama filaan ah Super la caag 8inch taayirrada pneumatic;
Free APP si ay u qoraan iyo wadaagno safar kasta, goobaha isbedel;
The saarayaasha hoverboard ka shaqeeyaa inta badan si ay u sameeyaan ay hoverboard kuwo deggan. Sidaas daraaddeed, tani waxay noqon kartaa xoog leh oo waarta hoverboard koronto for dusha kasta. Hoverboard ayaa bedelay wejiga gaadiidka gaarka loo leeyahay; hindiseen ganacsade American Shane Chen ee 2013 hoose uu soo maaxdey "Inventist". Sida by saarayaasha ku xusan waa quutaa toos ah inaad wax ka barato powerboard, celcelis ahaan waxay qaadataa 5 daqiiqo ah ee macaamilka in uu ordo powerboard by hoverboard. No xubno ka baaba'ay yihiin abid adeegsadaa iyada oo dhismaha waxyaabaha our dayac tiray oo waxay u ordi doona badan sida ugu fiican ee cusub. Ka hor inta qaabkoodoo kale iyo magac gaar ah u socdaan, waa marka hore loo baahan yahay in la ogaado waxa laga yaabaa inaad iska ilaalinaya. Xunna, aragti ugu horeysay ee waa aragti kama dambaysta ah. Wax ku ool ah, waa laga yaabaa in aan wax ka khayr badan Rover HALO ah. Waa talinayaa in si wadajir ah loo xaqiijiyo aad sharciyada maxalliga ah. Haddii aad jeceshahay ugu soo baxay ee segway handsfree cusub ee aad si fiican u qiime jaban ma tagaan. Waxaa jira kuwo ku dayda badan iyo qoraalkii uu haleysan ee hoverboards halkaas. By shaki yar K7 hoverboard waa mid ka mid ah hoverbaords cajiib muhiim ah halkaas, oo hubaal ka mid ah hoverboards heerka entry ugu fiican ee suuqa.
waqti Post: Oct-12-2017